I-eReader enhle kakhulu ongayithenga, ungayikhetha kanjani kahle? | Onke ama-eReaders
Ingabe ufuna i-eReader ehamba phambili? Namuhla emakethe kunezincwadi eziningi ze-elektroniki esingazithenga, kodwa ngeshwa ukuthenga i-eBook imvamisa akuyona into elula nokuthi noma ngubani angakwenza ngempumelelo. Ngakho-ke namhlanje ngale ndatshana sizokweluleka futhi sikunikeze imiyalo yokuthenga i-eBook enhle kakhulu futhi ungafi uzama.
Uma ucabanga nge- thenga isidla phambili, thatha ipeni nephepha noma ithebhulethi yakho, ukunaka konke esizokukhombisa kona ngezansi futhi okuzokusiza kakhulu ekukhetheni incwadi engcono kakhulu ye-elekhtronikhi ehambelana nezidingo zakho. Uma ufuna ukufika ephuzwini, bheka leli thebula:
Kindle Oasis, manje ene ... Bona ukunikezwa Ayikho imikhiqizo etholakele. Ayikho imikhiqizo etholakele. Bona ukunikezwa
Kobo Aura N236-KU-BK-K-EP ... Bona ukunikezwa
AMAPHUZU	 Impilo yebhethri enhle kakhulu enamacala akhethekile aklanywe yi-Amazon. Imodeli emisha kakhulu ye-Kindle.	 Lona uMusa ongekho kunombolo. 1 yokuthengisa ngobudlelwano bayo bekhwalithi nentengo eyamukelekayo neguquliwe.	 Ixhasa i-ePub ngokuzenzakalela, isici esifiseleka kakhulu sabafundi bezincwadi eziku-inthanethi zamahhala. Futhi imelana namanzi.
OKUHLE	 Idivayisi elula kakhulu enezinkinobho zokuvula amakhasi, isikrini sokuthinta, impilo yebhethri emangalisayo. Iza nenketho ye-WIFI, noma i-WIFI + 3G enokukhanya okuhlanganisiwe.	 Inakho konke okudingayo ukuze ube umfundi omuhle we-ebook emakethe yanamuhla: ukukhanya, i-Wi-Fi, isikrini sokuthinta, ukuzimela okuhle kanye nesisindo esincane.	 Kunokuncane noma okuncane lokho i-Kindle engaba nakho. Kepha okusekelwa ngqo yi-ePub kubalulekile kubafundi abaningi.
OKUBI	 Kukho konke okunakho, kungaqashelwa ukuthi isikrini sayo sincane kakhulu. Futhi ukwehla kwesibili yintengo yayo ephezulu.	 Abanye abafundi bendabuko abakasetshenziselwa iphepha elektroniki futhi bakhala ngokuthi akulona iphepha. Uqinisile.	 Ibhethri alihlali isikhathi eside njengoba uchaza. Futhi intengo ibiza kancane uma kuqhathaniswa ne-Kindle Paperwhite.
ISIPHETHO	 Uma ufuna ukuba nomfundi we-ebook onokwethenjelwa ngaphandle kokucabanga kakhulu ngentengo, i-Kindle Oasis iyindlela engcono kakhulu.	 Ekuhlolweni kwamakhasimende okungu-6.300+, kunamaphuzu aphakathi no-4,5 / 5, ngakho-ke lokhu kusho konke ukuthi kungukugcina okuhle.	 Isifundi esihle se-ebook ukuba ngenye indlela ye-Kindle ngoba akusithandi sonke ngokufanayo.
1 Ama-eReaders amahle kakhulu
1.1 I-Kindle Paperwhite
1.2 Kindle Oyisisekelo
1.3 I-Oasis yomusa
1.5 I-Energy eReader Pro
2 Ungayikhetha kanjani i-eReader ehamba phambili?
2.1 Isibonisi se-EReader
2.3 Ukuxhumeka kwe-WiFi noma kwe-3G
2.4 Idizayini ne-ergonomics
2.5 Isichazamazwi esihlanganisiwe
Lapho sesazazi ezinye zezinto ezisemqoka okufanele sizicabangele lapho sithenga i-eBook, sizophendula umbuzo wokuqala wokuthi iyiphi i-eReader ehamba phambili. Ukuze senze lokhu, sizohlola ezinye ze- ama-eReaders amahle kakhulu esingakuthola emakethe;
Kwabaningi Ayikho imikhiqizo etholakele. Yincwadi ephelele ye-elekthronikhi ngoba ihlanganisa kudivayisi eyodwa konke okudingekayo ukujabulela ukufunda futhi kungathengwa ngentengo ebiza kancane noma engabizi kakhulu kunoma yimuphi umsebenzisi.
Ngokombono wethu othobekile sibhekene nedivayisi ecishe iphelele, njengoba njengoba sonke sazi, ama-Amazon eReaders asebenzisa ifomethi yawo ye-eBook, ethi ezintweni eziningi ikhawulele izinketho zethu futhi kwezinye kube nzima ukuhlala kwethu emhlabeni wokufundwa kwedijithali.
Ngokulandelayo sizokwenza ukubuyekeza okuncane kwezimpawu ezisemqoka nokucaciswa kwe-Kindle Paperwhite;
Isibonisi esingu-6-intshi ngobuchwepheshe be-Letter e-paper nokukhanya okuhlanganisiwe kokufunda, i-300 dpi, ubuchwepheshe befonti elungiselelwe, nezikali ezimpunga eziyi-16
Ubukhulu: 16,9 cm x 11,7 cm x 0,91 cm
Isisindo: 206 amagremu
Ifonti yokubhukha, ekhethekile ku-Amazon futhi eyenzelwe ukufundwa okulula nokunethezeka
Ukufakwa komsebenzi wokufunda we-Kindle Page Flip ozovumela abasebenzisi ukuthi baphenye izincwadi ngekhasi, bagxume kusuka esahlukweni esisodwa baye kwesinye noma baze bagxume baye ekupheleni kwencwadi ngaphandle kokulahlekelwa iphuzu lokufunda
Ngaphandle kokungabaza, i-Kindle Paperwhite yenzelwe abaningi i-eReader ehamba phambili emakethe.
Ekugcineni asikwazanga ukukhohlwa i- Kindle, manje ngokukhanya ..., esisinikeza okulungile futhi okudingekayo ukuze sikwazi ukufunda izincwadi zedijithali ngentengo ephansi kakhulu nokuthi noma yimuphi umsebenzisi angacabanga ngaphandle komzamo omkhulu. Akufanele silindele okuningi kakhulu kule-eReader, kepha uma sifuna okuthile okuyisisekelo futhi okusivumela ukuthi sifunde, lolu hlobo lungaba yisixazululo esifanelekile.
Lezi yizici eziyinhloko nokucaciswa kwalolu hlobo oluyisisekelo;
Ubukhulu: 169 x 119 x 10,2 mm
Isisindo: 191 amagremu
1 I-GHz processor
Isitoreji sefu: kumahhala futhi akunamkhawulo kokuqukethwe kwe-Amazon
Thenga i-eBook enhle kakhulu Akuwona umsebenzi olula, kepha siyethemba ukuthi ngezeluleko esikunikeze zona kulo lonke lolu daba namamodeli esikukhombise wona, kuzoba lula kuwe. Iyiphi i-e-book enhle kakhulu kuwe? Uma ufuna okuthile okushibhile, nathi sinokukhetha okuhle kakhulu izincwadi ezishibhile.
El Kindle Oasis, manje ene ... Kungenzeka ukuthi yi-eReader enedizayini engcono esingayithola emakethe futhi futhi inezici nezincazelo ezidlula kude lezo zanoma iyiphi enye idivayisi. Yenziwe yi-Amazon, mhlawumbe okuwukuphela kwephuzu layo elibi yintengo yayo, okuwukuthi iphezulu kakhulu ukuba ibhajethi eyejwayelekile noma engaphansi.
Ngokulandelayo sizobuyekeza ifayela le- Ukucaciswa okuyinhloko kwale Kindle Oasis;
Isikrini: sifaka isikrini esingu-7-intshi nobuchwepheshe be-e-papper, touch, ngesinqumo esingu-1440 x 1080 kanye namaphikseli angama-300 nge-intshi
Ubukhulu: 16,2 cm x 11,5 cm x 0,76 cm
Esinye sezikhombo zemakethe ezinkulu ngamadivayisi we-Kobo, athuthukile eminyakeni edlule futhi asezingeni elifanayo ne-Amazon, yize okwamanje ingenalo idumela nokuthandwa kwe-Amazon. I- UKobo Aura H2O umnyama Ngenye yezimpawu zokuthi uKobo wenza izinto kahle kakhulu.
Futhi ukuthi lencwadi ye-elekthronikhi inezici ezithile, esizoyibuyekeza ngezansi, ezizosivumela ukuthi sikujabulele ukufundwa kwedijithali ngendlela ethokozisayo.
Ubukhulu: 179 x 129 x 9,7 mm
Isisindo: 233 amagremu
Isikrini esingu-6,8-intshi esinokulungiswa kwamaphikseli angama-1430 x 1080, ubuchwepheshe be-Letter ne-265 ppi
Ibhethri le-1.700 mAh Li-On
Imelana namanzi nothuli ngenxa yesitifiketi sayo se-IP-67
I-Energy eReader Pro
Uma sifuna i-eReader esisinikeza imininingwane ethile ethokozisayo futhi singayithola ngenani elincishisiwe noma elingaphansi, inketho enhle kungaba I-eReader ye-Energy Sistem ..., eyenziwe yinkampani yaseSpain i-Energy Sistem.
Nge ukwakheka ngokucophelela, ukukhanya okuhlanganisiwe kanye nokukhethekile ukuthi inenguqulo 4.2.2 ye-Android Njengohlelo lokusebenza, le divayisi ingahle ikulungele wena osanda kungena emhlabeni wokufunda kwedijithali.
Ngezansi sikukhombisa izici ezibalulekile nokucaciswa kwale Energy Energy eReader Pro;
Ubukhulu 160 x 122 x 10 mm
Isisindo esingu-220 amagremu
Isikrini sokuthinta u-inki esingu-6 intshi esinokulungiswa kwamaphikseli angama-758 x 1024 asinikeza amazinga angama-212 we-dpi namazinga ayi-16 empunga. Inokukhanya okuhlangene nokuguquguqukayo
I-ARM Cortex A9 1.0Ghz processor eyi-dual-core
I-RAM engu-512 MB
Isitoreji sangaphakathi esingu-8 GB sinwebeka ngekhadi le-MicroSD kufika ku-64 GB
2.800 mAh lithium ibhethri
Uhlelo lokusebenza lwe-Android 4.2.2 Jelly Bean
Uma usenokungabaza, sizokukhombisa uchungechunge lwezici okufanele uzicabangele lapho uthenga i-eBook ukuqala ukujabulela ukufundwa kwedijithali.
Ungayikhetha kanjani i-eReader ehamba phambili?
Kungaba ngenye indlela, isikrini singesinye sezici ezisemqoka zanoma iyiphi incwadi ye-elekthronikhi, futhi ukuthi ukufunda kuyo sizochitha izikhathi ezimnandi nsuku zonke. Ngalokhu, kubalulekile ukuthi une isikrini sosayizi ofanele, esinokulungiswa okuhle futhi ngangokunokwenzeka kukhanyiselwe ngaphakathia ngoba izosivumela ukuthi sifunde ngendlela enethezekile futhi ngaphandle kokukhathala noma ukuphazamisa amehlo ethu cishe kunoma iyiphi indawo.
Kubalulekile futhi ukuthi sibheke isikhathi sokuthenga eyodwa noma enye incwadi ye-elektroniki ngohlobo lukayinki oyisebenzisayo. Ubuchwepheshe be-e-inki Pearl buhamba phambili kakhulu emakethe futhi bukhona kumadivayisi amaningi avelele emakethe, kepha akudingekile ukuthi kuqinisekiswe ngalesi sici ngoba kuzosivumela ukuthi sifunde kahle futhi sibe nebhethri impilo ende kakhulu kunezinye izinhlobo zobuchwepheshe.
Ukubuyekezwa kweKobo Forma
Isikrini siyinhliziyo yencwadi ye-elekthronikhi, ngakho-ke ngaphandle kokungabaza, kungenye yezimpawu okufanele uzicabangele kakhulu lapho ukhetha i-eReader ehamba phambili.
Ibhethri imvamisa liyinto yesibili ezincwadini ezisebenza ngogesi, ngoba sibonga ngoyinki we-elekthronikhi ubude balo bulinganiswa emavikini, kodwa nathi akufanele sikhohlwe ngakho. Ngaphandle kokuncika kakhulu ekukhangisweni okwenziwa yibo bonke abakhiqizi ukuthi ibhethri ledivayisi yakho lihlala okungenani amasonto ayi-8, Kufanele siqaphelisise i-mAh yebhethri futhi sihlole imibono yabanye abasebenzisi kwi-Intanethi
Kuyathakazelisa futhi nokuhlola ukuthi hlobo luni lokukhokhiswa i-eReader enalo ngoba uma inamashaji asheshayo izosivumela ukuthi sikhokhise idivayisi ngesikhathi esifushane. Lokhu kungasiza kakhulu uma sihamba kakhulu nge-e-book yethu.
Kanye nesikrini, ibhethri kungenye into ebalulekile ebusweni be khetha i-eReader enhle kakhulu.
Ukuxhumeka kwe-WiFi noma kwe-3G
Kubasebenzisi abaningi lokhu kuzoba inketho engathandeki, kepha kwabambalwa kuzobaluleka. Futhi yilokho Uma i-eReader inokuxhumana kwe-WiFi noma kwe-3G, singafinyelela kalula imitapo yolwazi eyidijithali noma ngisho nomtapo wethu wezincwadi esinawo efwini.
Ngakolunye uhlangothi, i-eReader yethu entsha ayinalo uhlobo lokuxhuma, amathuba ethu uma kuziwa ekutholeni noma ekutholeni izincwadi zedijithali ancipha kakhulu. Kuyacaca ukuthi uma sibheka i- i-eBook ehamba phambili, ukuxhumeka kufanele kuphelele.
Singasho ukuthi ngemuva kufanele sibheke izici ezifana nokuklama noma i-ergonomics. Mayelana nokuklanywa singakwazi ukubheka ukuthi ayinayo emakhoneni kakhulu evezwe noma lokho akusivumeli ukuba sifunde ngokunethezeka.
Kungakuhle futhi ukuthi uvivinye le divayisi ngaphambi kokuyithenga, ngokwesibonelo endaweni enkulu, ukubheka ukuthi ikhululekile yini esandleni nokuthi ngeke kube mnandi kangangoba ngeke isivumele ukuthi sifunde, sijabulele ikhasi ngalinye.
Kuya ngalokho esikufundayo, kungenzeka kakhulu ukuthi sidinga ukuba nesichazamazwi esiseduze ukuze sikwazi ukubheka phezulu futhi siqonde amanye amagama. Amanye ama-e-book asevele anaso isichazamazwi esakhelwe ngaphakathi, ngakho-ke uma ungumngane wezichazamazwi futhi uzisebenzisa njalo lapho ufunda, bhekisisa ukuthi i-e-book ozoyithenga inayo lo msebenzi.
Uma usufike lapha futhi usenokungabaza, kulesi sixhumanisi Une-Reader ekhethiwe ongayikhetha ukuze ukwazi ukukhetha leyo evumelana kangcono nezidingo zakho.
I-Amazon Prime Reading, isilinganiso esisha seflethi sama-ebook?
Indlela ephelele ye-athikili: Onke ama-eReaders » Hardware » Ama-eReaders » I-eReader ehamba phambili
Awuzange ubheke amafomethi ezincwadi abangazifunda, kulokhu i-kindle impofu kakhulu.
Kukhona eminye imikhiqizo ethokozisayo, njengePocketBook, oyishaye indiva ngesihluku.
Ekugcineni, ukuphawula komuntu siqu: Abafundi be-Android bayashintshashintsha, kepha, okungenani kumsebenzisi ojwayelekile, kuyinkimbinkimbi kakhulu ukusebenzisa (futhi akuphelele kangako) kunedivayisi eyenzelwe ukufundwa kuphela.
Ake sithi kuyiqiniso ukuthi i-kindle ayiphathi wonke amafomethi, futhi kuyiqiniso ukuthi ukuguqula incwadi enjengempi kaTolstoy nokuthula kusuka ku-epub kuya ku-Azw noma mobi kuthatha cishe amasekhondi angama-23 ngobucayi naku-PC yami ukuthi ngine-amd 2- umnyombo
Kufanele uqaphele abakwa-Kindle ngoba kubonakala sengathi bahlele ukuphelelwa yisikhathi futhi kunzima kubo ukufinyelela eminyakeni emibili yokuphila. Ngemuva konyaka owodwa (lapho isiqinisekiso abasinikezayo siphela), bavame ukunikeza izinkinga eziningi zokusebenza, kuze kube yilapho ivinjelwa unomphela bese ilahlwa kude. Sesha i-inthanethi nge- "kindle lock" uzobona.
INGABE UKUGUQULWA KUNGENZELWA EMUVA? LOKHO KUSUKA KU-AZW KUYA KU-EPUB? NGIYABONGA.
Alberto Lozano placeholder image kusho
Ekhaya sisenomusa wesizukulwane sokuqala, othengwe ngoKhisimusi 2007, osebenzayo.
Futhi i-Kindle 4 esithenge uKhisimusi ka-2011 futhi, ekugcineni, ama-Kindle paperwhite amabili athengwe ngo-2012 nango-2013 ngokulandelana.
Ukusetshenziswa okunikezwa ngumndeni wonke kubanzi futhi munye kuphela we-paperqwhites ophahlazeke amahlandla ambalwa axazululwa ngokulandela imiyalo efonini evela e-Amazon (insizakalo enhle futhi esheshayo). Ngokushesha ngemuva kwalokho, kube nokuvuselelwa kwesistimu futhi akuzange kube khona izinkinga futhi.
Ngakolunye uhlangothi, amanye ama-ebook (uPapyre nezinye zesizukulwane sawo) ebesizithenga ekugcineni ziye endaweni eluhlaza ngokuyeka ukusebenza kwafakwa i-Kindle.
Umqondo wokuthi "ukuphelelwa yisikhathi okuhleliwe" akufanele uhlukunyezwe. Kuningi izinganekwane ezisemadolobheni ngemuva kwalesi sitatimende.
Kunamacala ambalwa kakhulu lapho i-kindle ishayisa unomphela, inkinga ivame ukuxazululwa ngokushesha. Eqinisweni, futhi njengoba inikezwe ubunzima bayo, iningi lezinto zanamuhla zobuchwepheshe zingaba nenkinga yokuvimba engaxazululwa ngokuqala kabusha okulula.
Yikuphi okungcono kakhulu ukufunda i-pdf? Benginaphakathi kwamashiya ami neKobo Aura eyodwa entsha kodwa ngibonile ukuhlolwa ku-YouTube futhi kuyadumaza ...
Ababalwa kakhulu cha. Ngangijabule futhi nge-Kindle 3 futhi nganginombono ofanayo nowakho, kuze kube yileli sonto ngokungazelelwe lafa kimi, ngilinakekele kahle futhi ngingalisebenzisi kakhulu, mhlawumbe ngafunda incwadi ngenyanga futhi lokho kuyisetshenziswa ngamandla aphansi. Lapho ngifuna inkinga yami online, ngithole amakhulu ezinkulungwane zamacala afanayo, kufaka phakathi izinkampani ezimbalwa ezikhethekile zokulungisa. Kubonakala kimi njengamacala "angavamile" noma "aqondile". Uthola izingqinamba ezimbalwa zokuphahlazeka noma zokufa okungazelelwe kunoma iyiphi enye into ethandwayo ye-elektroniki kunase Kindles. Ngokunikezwa kwamacala amaningi afana nalawa engihlangabezane nawo, ngiyangabaza ngekhwalithi ye-Kindle yama-Amazon. Okwamanje akukho okuxazulule inkinga yami, ngakho-ke ngikhethe ukuthenga ibhethri elisha futhi ngithandazela ukuthi leyo yinkinga. Uma kwenzeka ngiphoqeleka ukuthenga okusha, ngeke kube umkhiqizo we-Kindle, ngikhonjisiwe ukuthi ikhwalithi yayo iyangabazeka.
Ngicabanga ukuthi njengamanje kunzima ukushaya isilinganiso samanani / sekhwalithi esinikezwa yi-Kindle Paperwhite. Kuyiqiniso ukuthi kusukela ekuqaleni ayikwazi ukufunda wonke amafomethi… kepha ukusebenzisa i-Calibri kungaguqulwa kalula kufomethi ehambisana ne-Kindle.
Sawubona usuku oluhle. Ngabe inkinga yakho ixazululwe ngokuthenga ibhethri elisha?
Awukhohlwanga amafomethi kuphela, kanye nomsindo. Akukho okusetshenziselwa ukulalela i-audiobook noma umculo ngenkathi ufunda futhi, uma ngikhuluma iqiniso, uma kuzodingeka ngiphathe iselula noma ithebhulethi yokuxhuma ku-inthanethi, isidlali se-mp3 somculo nesifundi sezincwadi ... i-ereader eningi futhi ngihlanganisa yonke into ngethebulethi
USilvia Trachcel kusho
Nginezinkinga ngokushaja ibhethri le-ebook papyre 6.1 yami futhi isikrini sihloliwe enkombeni, ngithanda ukwazi ukuthi ngingaletha kuphi incwadi kagesi ukuthi ibuyekezwe
Ungangitshela ukuthi izincwadi ze-elektroniki zisetshenziselwa ukukuxhuma kwinethiwekhi yomphakathi yemitapo yolwazi kazwelonke bese uzilanda ngqo.
Phendula ukuze ube msulwa
Ngifuna ukuthenga i-e-reader, eshibhile ngangokunokwenzeka, engivumela ukuthi ngifunde i-pdf (hhayi njengesithombe kepha njengombhalo) ne-epub futhi, uma kungenzeka, ngibe nenketho yama-audiobooks.
Akukho engikwenzayo ngaphandle kokuhlaziywa kokufunda kepha akukho okucacile ngokuphawula kwabantu. Isibonelo, imvamisa ukubuyekezwa kwe-Kindle kuthi kuhle ngentengo enayo nokuthi ifunda i-pdf nokunye, kepha abasebenzisi abaningi bathi banika izinkinga eziningi, ukuthi ama-pdfs azifunda kuphela njengezithombe ngakho-ke ushiye i- buka ukufunda okuthile okuncane noma kufanele uye ngakwesokunene nangakwesobunxele ukuze ulingane isithombe ekhasini.
Ngifundile nokuthi i-TAGUSS yinhle kepha kubonakala sengathi ayihambisani nezincwadi ze-amazon ...
Noma kunjalo, ngilahlekile kakhulu futhi ngifuna umuntu ofundayo ngoba ngihlala ngilayishwe izincwadi eziningi: ')
Akekho umfundzi ozokunikeza imiphumela egculisayo ngama-PDF. Inketho enhle kakhulu ukuguqula njalo i-PDF iye ePub isuke kwi-PC.
Bengifuna into efanayo futhi ekugcineni ngicabanga ukuthi ngizokhetha i-likbook yeMars de Boyue. Ama-booxes nawo makhulu, kepha inani liphezulu kakhulu.
Ignatius Nachimowicz kusho
Kungani kwenzeka ukuthi ekuhloleni ngakunye kwabafundi be-e okwenziwa, kushiyiwe ukucacisa ukuthi inani elikhulu kakhulu lemisebenzi elisenetheni lisefomethi ye-e-pub, engahambelani ne-Kindle?
Kungani kungabonakali ukuthi, ngakho-ke, futhi njengoba ifomethi ethile yohlobo oluthile kuphela evumayo, umuntu uphoqeleka ukuthenga kuphela imisebenzi yohlobo lwe-kindle, ethengiswa yi-Amazon, futhi engeke ilandwe? i-inthanethi yamahhala?
Ngiyazi ukuthi konke ukuguqulwa okudingekayo kungenziwa kusayithi leCaliber, kepha kungani uzithoba kulolohlupho, uma ukwazi ukufunda ngqo ku-e-pub?
Ngoba ngokuyisisekelo ungakwazi ngokuguqula iCaliber ukuguqula ama-ebook ngefomethi ye-epub abe yifomethi ye-mobi noma ye-azw3, okuyilawo amukelwa yi-Kindle.
Ngaleso sizathu, ezibuyekezweni eziningi abasho nokusho, ngoba ngeCaliber inkinga yefomethi yohlobo oluthile "ixazululiwe".
Izincwadi ezizofundwa ngesiNgisi
Incwadi yesihlanu kaGrey